အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း - MyanTrade
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ သည့်နောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသည် COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအား ထိရောက်စွာ တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် No. 40-3/2020-DM-I(A) ကို နောက်ဆက်တွဲ လမ်းညွှန်ချက် ၁၈ ချက်နှင့်အတူ ၂၄.၃.၂၀၂၀ နေ့တွင် ထုတ်ပြန် လျက် နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ ဆက်သွယ်သွားလာမှုများအား ၂၅.၃.၂၀၂၀ နေ့မှစ၍ ၂၁ ရက်ကြာ ကာလအထိ ကန့်သတ်တားမြစ်လိုက်ပါသည်။
အဆိုပါအမိန့်အရ ကန့်သတ်တားမြစ်ကာလအတွင်း အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ အစိုးရ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများရှိ အရေးကြီးသည့် လုပ်ငန်းဌာနများမှ အပကျန်ရှိသည့် အစိုးရဌာနများ၊ အလုပ်ရုံများ၊ ကျောင်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းတည်ထောင်မှုများနှင့် အများ ပြည်သူဆိုင်ရာဘာသာရေးဝတ်ပြုမှုနေရာများကို ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအတွင်း ကုန်း၊ ရေ၊ လေ ဆက်သွယ်သွားလာမှုများအားလုံးကို ကန့်သတ်ဆိုင်းငံ့ထားမည် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု၊ အခြေခံစားသောက်ကုန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အခြားလိုအပ်သည့် အရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို စည်း ကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုထားမည်ဖြစ်သည်။
ဗဟိုအစိုးရအဆင့်၌ ကာကွယ်ရေး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ငွေတိုက်ဌာန၊ ရေနံနှင့်ဓါတ်ငွေ့ဖြန့်ဖြူးမှု အပါအဝင် ပြည်သူ့အသုံးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး၊ စာတိုက်လုပ်ငန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ပြန်ကြားရေး စသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသည်။ ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအစိုးရအဆင့်တွင် အလားတူလုပ်ငန်းဌာနများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုထားပြီး ရေနှင့်မိလ္လာသန့်ရှင်းရေး မြူနီစီပယ်လုပ်ငန်းများ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ဓါတ်ခွဲစမ်း သပ်ခန်းနှင့် ဆေးဝါးအရောင်းဆိုင် စသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ နို့ထွက် ပစ္စည်း၊ သားငါး၊ သစ်သီးဝလံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အခြားစားသောက်ကုန်များနှင့် ရိက္ခာခွဲတမ်းများအား ရောင်းချသည့် ဆိုင်လုပ်ငန်းများ၊ အိမ်အရောက်ပို့ စနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အာမခံနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ တယ်လီဖုန်းနှင့် အင်တာနက် ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ပုံနှိပ်နှင့် သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကာကွယ်ရေး အစီအမံများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားသည်။
နိုင်ငံအတွင်း အရေးကြီးလိုအပ်သည့် အခြေခံကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်းများ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ အစိုးရများထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရယူဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ အရေးကြီးကုန်စည်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ကန့်သတ်တားမြစ်ကာလအတွင်း မိမိနေရပ်ဒေသ သို့မပြန်နိုင်ပဲ နိုင်ငံအတွင်း ပိတ်မိနေသည့် နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ပြည်တွင်းရှိဒေသအသီးသီးမှ နိုင်ငံသားများ အတွက် ဟိုတယ်နှင့်တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နာရေးကိစ္စများရှိပါက လူ ၂၀ ဦးထက် ပိုမိုစုဝေးမှုမရှိပဲ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု ကြောင်း၊ ယခုထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်ပါ အချက်များအား ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Source: 1. India 21 day Lockdown: What is exempted, what is not, 24 March 2020, Economic Times
2. Order No. 40-3/2020-DM-I(A) of Ministry of Home Affairs of India, 24 March 2020